Abaabulka dibed bax weyn oo caawa laga dareemayo Muqdisho & Xog ku aadan | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Abaabulka dibed bax weyn oo caawa laga dareemayo Muqdisho & Xog ku...
Banaanbax balaaran ayaa lagu wadaa in maalinta berri uu ka dhaco magaalada Muqdisho, kaasoo lagu taageerayo codsigii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay furitaanka kalfadhigii 7aad ee Baarlamaanka Somalia.
Farmaajo ayaa ka codsaday Labada Aqal ee Baarlamaanka iney ansixiyaan xubnaha lagu kordhinayo aqalka sare ee metelaya gobolka Banaadir si uu muraayad ugu noqdo dhammaan shacabka Soomaaliyeed
Maamulka Gobolka Banaadir iyo Guddiga Abaabulka iyo Wacyigelinta Qaranka ee loo yaqaano Xooggaga Waddaniyiinta ayaa caawa isla wada qaban qaabada banaanbaxaas.
Ugu yaraan afar goobood ayaa loo diyaariyay in dadka dibad baxayaasha la isugu keeno, iyadoo jidadka loo xiri doono inta banaanbaxu socdo, waxaana maamulada degmooyinka lagu wargeliyey iney diyaariyaan dadkii banaanbaxaas ka soo qeyb geli lahaa.
Ammaanka taalada Daljirka dahsoon iyo goobaha kale ee la filayo inuu saameeyo banaanbaxaas ayaa si weyn loo xoojiyey caawa, waxaana la dhigay ciidamo ku hubeysan gaadiidka dagaalka, iyadoo la filayo iney banaanbaxaas khudbado ka jeediyeen masuuliyiin ka tirsan DF iyo maamulka gobolka Banaadir.
Abdi Malik 3 mins ago
Somalia: Ku dhowaad 100 qof oo laga helay COVID-19 & dad cusub oo u dhintay
Sawirro:Maxaa Kasoo Baxay Kulankii Axmed Madoobe Kismaayo Ku Shir Gudoomiyey?
Doorasho toos ah oo qof iyo cod ah si Soomaaliya ugu dhacdo waxaa loo baahan yahay:
Maxamed Caalim ”Xalka Soomaaliya Waa In Kheyre la Casilo iyo in Farmaajane Loogu…”
Abaabulka dibed bax weyn oo caawa laga dareemayo Muqdisho & Xog...
Somalia: Ku dhowaad 100 qof oo laga helay COVID-19 & dad...